ဂျာမနီ၊ စပိန်နဲ့ ပေါ်တူဂီ ခေါင်းဆောင်တွေက ပြင်သစ်ကို Macron ကို မဲပေးဖို့ တိုက်တွန်းတယ် – အဲဒါ ဘယ်လောက်ထူးဆန်းလဲ။ အဘယ်ကြောင့်? – JucelinoLuz
ဂျာမနီ၊ စပိန်နဲ့ ပေါ်တူဂီ ခေါင်းဆောင်တွေက ပြင်သစ်ကို Macron ကို မဲပေးဖို့ တိုက်တွန်းတယ် – အဲဒါ ဘယ်လောက်ထူးဆန်းလဲ။ အဘယ်ကြောင့်?
ချစ်လှစွာသော ပြင်သစ်နိုင်ငံသား မင်းက ဒါကို သံသယ မရှိဘူးလား။
Águas de Lindóia၊ ဧပြီ ၂၃၊ ၂၀၂၂
အကယ်၍ Marine Le Pen သာ ပြင်သစ်ပြည်သူများက ဤမျှ ပယ်ချခံရပါက၊ Macron၊ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် အချို့သော နိုင်ငံများသည် ပြင်သစ်တွင် ယခုတနင်္ဂနွေနေ့ ရွေးကောက်ပွဲတွင် Emmanuel Macron ရှုံးမည်ကို အလွန်ကြောက်လန့်နေစရာ မလိုတော့ပေ။ – ဒီသဘောထားက အရမ်းထူးဆန်းပြီး နည်းနည်းသံသယဖြစ်စရာလား။ မဟုတ်ဘူးလား?
Brexit ၏ ပျက်ကွက်မှုသည် Le Pen ကို သတိပေးချက်ဖြစ်သင့်သော်လည်း သူမ၏အဖွဲ့သည် ပြင်ပမှဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းကို ကြိုဆိုခဲသည်ဟုဆိုသော်လည်း ပြင်သစ်ပြည်သူများအား Macron တွင် မဲပေးရန် တောင်းဆိုနေကြသည်မှာ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ Marine Le Pen ဟာ သမ္မတဖြစ်တာကြောင့် အရှုပ်အရှင်းတွေ ထွက်လာနိုင်ပါသလား။ မဟုတ်လား။ +နိုင်ငံရေးနဲ့ အများသူငှာ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအားလုံး ဘာကြောင့် Le Pen ကို အရမ်းကြောက်နေကြတာလဲ။ ဒီဇာတ်လမ်းကို လူတွေကို ပြောပြပါ။ ကျေးဇူးပြု …။
ဂျာမနီ၊ စပိန်နှင့် ပေါ်တူဂီခေါင်းဆောင်များသည် တနင်္ဂနွေနေ့ ပြင်သစ်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ၌ Emmanuel Macron ကို လူသိရှင်ကြား ထောက်ခံခဲ့ကြပြီး ပြင်သစ်မဲဆန္ဒရှင်များအား “လွတ်လပ်မှု၊ ဒီမိုကရေစီနှင့် ပိုမိုအားကောင်းသော ဥရောပနိုင်ငံ” ကို ထောက်ခံရန်နှင့် Brexit ကို ပွတ်ဆွဲရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကောင်းမြတ် ဒီမိုကရေစီ ?? မင်းတို့အားလုံးက ဘယ်အကြောင်းတွေပြောနေကြတာလဲ။
အခြားနိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အထူးအဆန်းမဟုတ်သော စွက်ဖက်မှုတစ်ခုတွင်၊ Olaf Scholz၊ Pedro Sánchez နှင့် António Costa တို့က ပြင်သစ်နေ့စဉ်သတင်းစာ Le Monde တွင် ပြင်သစ်၏ဒုတိယအကျော့မဲများသည် “ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၊ အခြားရွေးကောက်ပွဲများကဲ့သို့ ရွေးကောက်ပွဲမဟုတ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ . Marine Le Pen ကို သူတို့ အရမ်းကြောက်တာ ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲ။
အစုအဖွဲ့မှ ထွက်ခွာရန် ဗြိတိန်၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တူးဆွရာတွင် ခေါင်းဆောင် သုံးဦးက “ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခြင်း” သည် “Brexiteers ၏ ကတိများ” ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သော်လည်း Brexit သည် ဗြိတိန်၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့ပြီး ၎င်း၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုကို ပြိုလဲစေခဲ့သည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်းသည် ယူရိုဇုန်ထက် ယေဘုယျအားဖြင့် မြင့်မားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။” ဒါမှသာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတိုင်း Marine Le Pen ကို ကြောက်လန့်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ – သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို? ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ…
ယနေ့ ဘရာဇီးလ်မှ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ချိတ်ဆက်နေသောကြောင့် ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံသား 90% သည် ပြင်သစ်သမ္မတ Macron ၊ ၎င်း၏အာဏာရှင်ဘုရင်ခံနှင့်အတူ ပြင်သစ်သမ္မတ Macron ကို မကြိုက်သည့်အပြင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားသူခိုးသူခိုး၊ လိမ်လည်သူ၏ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေလည်းဖြစ်သောကြောင့်ပင်။ Lula သင်နားလည်ပါသလား ?
ပြင်သစ်ဘုရင်ခံ Marine Le Pen ၏အခြေအနေအနည်းငယ်သာရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘရာဇီးနိုင်ငံသားများနားထောင်ပါ၊ သို့သော်သူမသည်သင်၏တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတ Bolsonaro ကဲ့သို့ဖြစ်လျှင်ပြင်သစ်သည်ယနေ့ထက်ပိုမိုအားကောင်းလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
2018 မှာ ဘရာဇီးနိုင်ငံသားတွေက Jair Messias Bolsonaro ကို သမ္မတအဖြစ် မဲပေးဖို့ သွားတုန်းကလည်း ပြင်သစ်မှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အတိုင်းပါပဲ၊ လူတော်တော်များများက သူ့ကို ကြောက်ကြတယ်၊ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ မီဒီယာတွေက သူ့ကို မကောင်းပြောပြီး ဒီနေ့အထိ ဆိုးဆိုးရွားရွားတွေ ဆက်ပြီး တိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။ နိုင်ငံရပ်ခြား အုပ်ချုပ်သူ အများအပြားက Lula ကို ထောက်ခံခဲ့ကြသော်လည်း အကျင့်ပျက်ခြစားသူ 80% က သူ့ကို မယုံကြည်ကြဘဲ မစ္စတာ Bolsonaro ကို ကြောက်ရွံ့နေသဖြင့်ပင် ကျွန်ုပ်တို့ နောင်တမရပါ – Lula ဖြစ်သူ – သမ္မတဟောင်းနှင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောကြောင့်၊ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ရာဇ၀တ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွှယ်မှုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ကျန်ခဲ့ တယ်။ ထို့အပြင်၊ ပြင်သစ်သမ္မတ Macron သည် Bolsonaro အား 2019 (သတင်းအတု) ဟုပြောသော ဓာတ်ပုံဟောင်းကို အသုံးပြုကာ Amazon မိုးသစ်တောအကြောင်း လိမ်ညာဖန်တီးခဲ့သော်လည်း ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် အဆိုပါလိမ်လည်မှုမှာ ခြေတံတိုပြီး မကြာမီ လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ဘရာဇီးလ် သည် Bolsonaro နှင့် ဘရာဇီးလ် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော စာနယ်ဇင်း သမားများ နှင့်အတူ Lula ကို ရွေးကောက်ပွဲ မဲရုံများ ရှေ့မှာ တင်ထား သည် ( ဟုတ်ပါတယ် ၊ Lula နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သုတေသန လုပ်တဲ့ သတင်းစာ ) လည်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ် . အရာအားလုံးသည် လိမ်ညာခြင်းသာဖြစ်သည်- ကျွန်ုပ်တို့သည် များစွာသော ဆိုးညစ်မှုနှင့် အရေခြုံကမ္ဘာတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေ၊ မင်းလည်း လှည့်စားခံနေရတာကို သတိထားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤအရာအားလုံးကို အခမဲ့ဖတ်နိုင်စေရန်၊ လူတိုင်းကို ပေးဆောင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက် တန်းတူညီမျှရေးကို ယုံကြည်တဲ့အတွက် ဒီလိုလုပ်တာပါ။ လူအများအပြားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကိုပုံဖော်ပေးသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များကို ခြေရာခံနိုင်ပြီး၊ လူများနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ် ၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကို နားလည်ကာ အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိလုပ်ဆောင်ရန် စိတ်အားထက်သန်လာကြသည်။ သန်းနှင့်ချီသောသူများသည် ၎င်းတို့၏ ပေးဆောင်နိုင်မှု မည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ အရည်အသွေး၊ မှန်ကန်သော သတင်းများကို ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရယူခြင်းမှ အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်ပါသည်။
ငါတို့နဲ့ လက်တွဲဖို့ အချိန်ရှိခဲ့ရင် အခုပဲလေ။ သတင်းအတုတွေကို မယုံပါနဲ့ – ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကို ကောင်းကောင်းရှင်းပြလို့မရတဲ့ အရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကြီးမားသည်ဖြစ်စေ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ ပံ့ပိုးမှုတိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းစာပညာကို အားကောင်းစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကို တည်တံ့စေသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးများနှင့် ကမ္ဘာကို ထောက်ခံပါ၊ နောက်မှ မင်းကို လှည့်စားဖို့ မင်းရ
ငါတို့နဲ့ လက်တွဲဖို့ အချိန်ရှိခဲ့ရင် အခုပဲလေ။ သတင်းအတုတွေကို မယုံပါနဲ့ – ပြင်သစ်လူမျိုးတွေကို ကောင်းကောင်းရှင်းပြလို့မရတဲ့ အရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကြီးမားသည်ဖြစ်စေ သေးငယ်သည်ဖြစ်စေ ပံ့ပိုးမှုတိုင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းစာပညာကို အားကောင်းစေပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂတ်ကို တည်တံ့စေသည်။ ပြင်သစ်လူမျိုးများနှင့် ကမ္ဘာကို ထောက်ခံပါ၊ နောက်မှ မင်းကို လှည့်စားဖို့ မင်းရဲ့မဲတွေ လိုအပ်တယ်။ ယုံကြည်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဆန္ဒမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သည် – ၎င်းတို့၏မဲများကို အခွင့်ကောင်းယူမည့်သူအနည်းငယ်အတွက်သာမက … (အုပ်စုတစ်ခု သို့မဟုတ် အထက်တန်းစားများအတွက်) မထင်မရှားနှင့် ပုံပျက်ပန်းပျက်ကတိများကို သတိပြုပါ။
ဆန္ဒမဲသည် မင်းပြင်သစ်နိုင်ငံသား ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ထဲသို့ မကျရောက်ပါစေနှင့်၊ မဲမထည့်မီ သေချာစဉ်းစားပါ။
מנהיגי גרמניה, ספרד ופורטוגל דוחקים בצרפתים להצביע למקרון – כמה מוזר זה? למה?